BBC Somali, Ma Waxay Dagaal Kula Jirtaa Madaxweynaha DDS Mustafe Cagjar? - Jigjiga Online
HomeSomalidaBBC Somali, Ma Waxay Dagaal Kula Jirtaa Madaxweynaha DDS Mustafe Cagjar?
Jigjiga (JigjigaOnline) – Intii uu xilka hayey madaxweynaha cusub ee Dawladda Deegaankka Soomaalida, Mustafe Muxumed Cumar, waxay dadka deegaanku dareemeen furfurnaan siyaaasadeed, xorriyad dhaqdhaqaaq, hadal, ganacsi iyo xaddidaad la’aan baahiyahooda aasaasiga ah.
Waxa meesha ka baxay xukunkii adkaa ee cabudhinta, caga-juglaynta, dilka, dhaca iyo boobka ku dhisnaa ee siddeedda sannadood mugdiga geliyey nolosha shacabka, taas oo geyeysiisay in illaa hadda ay wajiyada shacabka kasii muuqdaan nabarrada hagardaamadii ay kula kacayeen intii xilka u haysay iyo u adeegayaashii dhegaha fududaa ee HEEGO iyo madaxweynahoodii Cabdi Maxamuud Cumar ee ku farxi jiray dhibaatada dadkiisa.
Ma jirin qof hadli karaayey, ma jirin qof ganacsan karayay, mana jirin qof hubay in naftiisu ay ka baddbaadi karayso gacanta loo carbiyey dhibaataynta dadkooda, waxaana duhur cad haweenka lagu kufsanayey dariiqyada oo marka dambena la deldalayey iyadoo aanay cidina juuq odhan karaynin. Tusaale waxa ku filan kiiskii dunida oo dhan ka qaylisay ee gabadhii hadhka cad la kufsaday ee haddana la deldalay.
Ragga ayaa qasab lagaga saarayay gurahooda, waxaana loo weydaaranayey dumarkooda iyo hablahooda oo sidii la doono laga yeelayay iyadoo qofka hadlana uu halkaas naftiisa ku waayayey.
Inta dhimatay ee sida damiir la’aanta ah loo xasuuqay waxa dheeraa, kuwa jeelal Cadaab ah loo sameeyey oo laga buux-dhaafiyey marka ay muddooyin badan ku jiraana kuwo badan jidh-dilka u geeriyoodeen, sida ka dhacday Jeelka weyn ee magaalada Jigjiga ee Jeel Ogaadeen.
Waxa duleedka magaalada Jigjiga laga helay Xabaal-wadareedyo lagu aasay boqollaal qof oo iyagoo laysku xidh-xidhay xabbad lagu furay kaddibna cagaf ay ciidda ku rogtay. Dadkaas, waxa aan wali ka quusanin ehelladoodii oo ku riyoonaya in maalin uun iyagoo socda ay u iman doonaan, sababtoo ah, ma hayaan wax caddayn ah oo muujinaya in lafaha la helay ay kuwa ay raadinayaan yihiin.
Waxa aan tiro lahayn, inta ganacsade ee si sharci darro ah loogala wareegay hantidoodii ee maanta iyagoo caydh ah dariiqyada fadhiya.
Waxaas oo dhan way dhamaadeen, waxaana ninkii tacaddigaas dadka u geystay uu ka dhex barooranayaa jeel ku yaalla Addis Ababa, halkaas oo ay kaga socoto maxkamad aan wali go’aan ka gaadhin xukunka kiiskiisa madow, iyadoo wajigiisa oo ay ka muuqato dulmigii uu geystay iyo dhiiggii umadda uu xaqdarrada ku laynayey sidii tuug lasoo qabtay isagoo katiinadaysan uu ka dhex-barooranaya xukaamta hortooda.
Waxa guud ahaan deegaanka u beryay waa cusub, waxaanay galeen marxalad haddii sannad ka hor la weydiin lahaa aanu qofna ku riyoon karaynin. Waxay taasi keentay, in dadku ay mudaharaadi karaan iyagoo raacaya sharciga, u hadli karaan si buuxda iyagoo xattaa dhaliil u jeedinaya madaxdooda.
Waa tallaabo muujinaysa dimuquraaddiyadda ka hana-qaadday deegaanka, taas oo damaanaddeedana uu bixiyey madaxweyne Cagjar oo u sheegay shicibkiisa inay dhaliili karaan, waxay doonaana ka sheegi karaan, iyadoo uu meel fagaare ah kaga dhawaaqay ereyadan: “Waad i dhaliili kartaaan, waxaad doontaan ayaad iga sheegi kartaan. Halka aad ka bilaabaysaana aan idiin sheego. Waxaad tidhaahdaan, madaxweynihii hore wuxuu ahaa Ina Ilay, Kanna waa Ina Cagjar, miyaanu deegaanka sooba maraynin madaxweyne dhamaystiran.”
Aad ayaa loogu sacabo-tumay hadalkaas, laakiin haddana mucaaradku dhaliilo maamul oo uu dhibsan karo ayay u jeedinayaan.
Waxa magaalada Jigjiga lagu xidhay siyaasiyiin uu hormood u yahay Khadar Jigre oo mar dambe lasii daayay, laakiin kuwo kale oo la xidhnaa ayaa iyaguna muddo kaga sii dambeeyey.
Arrintani waxay keentay su’aalo la xidhiidha xorriyaddii uu madaxweynuhu ballanqaaday waxa soo daba-maray.
Idaacadda BBC Somali ayaa xadhigga siyaasiyiintan, waxay ka qortay warbixin dheer oo dhinac ah, kana madhnayd dheellitirka iyo shuruucda saxaafadda, waxaanay si aan dhexdhexaad ahayn u faaqideen arrintaas.
Warbixinta ay BBC Somali qortay oo ay dad badan akhristeen, waxa cinwaan looga dhigay ‘Mustafe Cagjar Ma Wuxuu Cagta Saaray Dhabaddii Cabdi Maxamuud Cumar?’. Cinwaanka ayaaba ahaa mid layaab lahaa oo warbixintooda dilayayey.
Waxa qoraalkaas lagu soo qaatay xadhigga siyaasiyiintaas iyo dhacdooyin yaryar oo kale oo ka dhacay deegaaanka, laakiin waxa ubucdeedu ahayd in Mustafe Cagjar ay ku masaalaan inuu la mid yahay Cabdi Ilay oo uu sidiisii ula dhaqmayo shicibkiisa.
Xilliga warbixintan la daabacay, waa waqti uu faaruq yahay jeelkii Cadaabta ee Jeel Ogaadeen, isla markaana aanay jirin hal tallaabo oo xukuumadd cusub qaadday oo xattaa laga dhadhansan karo ad-adkayg iska daa in la barbar-dhigo maamulkii ka horreeyey e.
Si kastaba ha ahaatee, qormadaas BBC Somali, waxay ahayd mid ujeedaddeedu ahayd in layskaga hor keeno Shacabka DDS iyo dawladdooda, mucaaradadna loogu abuurayay Madaxweyne Mustafe Cagjar.
Mustafe Cagjar: Liyuu Booliska Iyo Wixii Lamid Ah Looma Baahna